RASMI: Horyaalkii Dalka Scotland Oo La Kansalay, Haddii Celtic Oo Hoggaanka Haysay La Siiyay & Saamaynta Cad Ee Uu Liverpool Ku Yeelanayo – Gool24.Net
RASMI: Horyaalkii Dalka Scotland Oo La Kansalay, Haddii Celtic Oo Hoggaanka Haysay La Siiyay & Saamaynta Cad Ee Uu Liverpool Ku Yeelanayo
18/05/2020 Apdihakem Omer Adem
Maamulka horyaalka Scotland ayaa ku dhawaaqay inay gabi ahaanba kansaleen oo ay gabo-gabeeyeen xilli ciyaareedkii horyaalkaas isla markaana go’aan laga gaadhay haddiiba koobka loo gacan gelinayo kooxdii tartanka hoggaaminaysay ee Celtic.
Maaha horyaalkii ugu horreeyay ee Yurub ah ee la kansalo balse waxa ka horreeyay horyaaladii waaweynaa ee France, Holland iyo Belgium iyadoo horyaalkii Holland ugu sarreeyay ee Eredivise laga soo qaaday waxba kama jiraan.
Horyaaladii France iyo Belgium ayaa loo kala gacan geliyay kooxaha Club Brugge oo Belgium hoggaaminaysay iyo Paris Saint-Germain oo majaraha u haysay France Ligue 1.
Si lamid ah labadaas dal ee kale, horyaalka ugu sarreeya Scotland ayaa koobkiisii loogu dhawaaqay in loo gacan gelin doonto Celtic oo hoggaanka ka haysay kooxda booska labaad ee Rangers.
Go’aankan ayaa ah mid u wanaagsan dhagaha kooxda Liverpool maadaama kooxihii lamidka ahaa oo ay waliba haatan soo raacday Celtic oo ay UK kawada tirsan yihiin in horyaalkii la siiyay.
Boodhka xidhiidhka kubadda cagta dalkaas ee SPFL ayaa saaka oo Isniin ahayd soo yeeshay shir ay kaga arrinsanayaan xilli ciyaareedkoooda waxaana ay ku go’aamiyeen in horyaalka la siiyo Celtic waxkastana halkaas lagu soo af-meero.
Celtic oo ah kooxda ugu guulaha badan dalkaas ayuu koobkani u noqonayaa horyaalkeedii 51-aad ee Scottish Premiership ah halka kooxda Hearts loo dhaadhiciyay heerka labaad ee horyaalka dalkaas.